शिक्षकको नाममा यस्तो नोट लेखेर विद्यार्थीले किन गरे अप्रिय निर्णय ? – Jaljala Online
साउन १२, महेन्द्रनगर । महेन्द्रनगरस्थित श्री लिटिल बुद्ध कलेजमा अध्ययनरत एक विद्यार्थीले ‘सुसाइड नोट’ लेखेर आत्महत्या गरेका छन्।
यो खबर गोकुल जोशीले नेपालखबरमा लेखेका छन् । कलेजको कक्षा १२ व्यवस्थापन संकायमा अध्ययनरत भीमदत्त नगरपालिका भाँसीका सुरज लेखकले ‘सुसाइड नोट’ लेखेर आत्महत्या गरेका हुन्।
उनले आत्महत्या गर्नुपूर्व लेखिएको ‘सुसाइड नोट’ मा कलेजका एक जना शिक्षकको नाम समेत इन्गित गरेका छन्। सुरजले ‘सुसाइड नोट’मा आफू मर्नुको कारण लिटिल बुद्ध कलेजका व्यवस्थापन संकायका संयोजक हरिलाल जोशीलाई जिम्मेवार ठहर गरेका छन्। मृतकका परिवारले पनि कलेजका शिक्षकले उनलाई मानसिक तनाब दिने गरेको आरोप लगाएका छन् ।
कलेज समयमा कलेजको पोशाकमा होटलमा बसिरहेका उनीहरुलाई संयोजक हरिलाल जोशीले समातेर कलेजमा पुर्‍याए। कलेज बिदा भइसकेपछि धेरै अबेरसम्म उनीहरुलाई कलेजमै राखियो। ती तिनै जनालाई धेरैबेर कलेजमा नै पर्खाएर पछि भोलिदेखि नियमित विद्यालायमा आउने लिखित प्रतिबद्धता गराएर छोडियो। यसबीचमा उनीहरुबाट लिखित रुपमा कागजमा ‘औँठा छाप’ गराउने काम मात्रै भएन, उनीहरुको अभिभावकलाई विद्यार्थीको अवस्था बारे जानकारी दिने काम समेत भयो।
‘सुसाइड नोट’ मा औँठाछाप
सुरजको ‘सुसाइड नोट’ को अन्त्यतिर उनले औँठाछाप लगाएका छन्। यसले कलेजमा कागज लगाएको ‘औँठाछाप’ले उनी निकै मानसिक रुपमा बिचलित भएको संकेत दिन्छ।
यो कुरा कलेज परिवारले समेत स्वीकार गरेको छ। ‘सुसाइड नोट’ मा उल्लेख भए बमोजिम सुरज ‘औँठा छाप’ ले निकै तनावमा आएको जस्तो देखिन्छ। कलेजमा लगाएको ‘औँठा छाप’ ले आफूले धेरै गल्ती गरेजस्तो तथा बुवा आमाको बदनामी भएजस्तो संकेत दिने खालको ‘सुसाइट नोट’ छ।
उनले सुसाइट नोटमा लेखेका छन्, ‘बुवा अब बहुत भयो, अब म हजुरहरुलाई धेरै टेन्सन दिन चाहँदिन। कलेजबाट आएको कम्प्लेनहरुले हजुरहरुलाई निकै डिस्ट्रब ग¥यो र म पनि हजुरहरुलाई टेन्सन दिएर धेरै ……।’
कलेजका संयोजक हरिलाल जोशी बर्खास्त भएका छन्। कलेज व्यवस्थापन समितिको बैठकले उनलाई शिक्षक तथा संयोजकबाट हटाइएको कलेजका प्रिन्सिपल श्यामसिंह मौनीले बताए। ‘सुसाइड नोट’ मा उनको नाम उल्लेख भएपश्चात् सिंगो विद्यालयको ओजमा नै प्रश्न उठ्ने भएकाले व्यवस्थापन समितिको निर्णय बमोजिम हरिलाल जोशीलाई आइतबारदेखि सेवाबाट हटाइएको हो।
मृतक सुरजका बुवा गणेश दत्त लेखकले ‘सुसाइड नोटमा’ मा उल्लेख भएको नाम विरुद्ध जिल्ला प्रहरी कार्यालय कञ्चनपुरमा किटानी जाहेरी दिएको बताए। घटनाको सत्य, तथ्य छानबिन गरी दोषिमाथी कारबाहीको माग गरिएको छ। ‘सुसाइड नोटमा’ मा उल्लेखित ‘मृत्युको कारण’ हरिलाल जोशी विरुद्ध दिइएको उजुरी दर्ता भएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय कञ्चनपुरका डिएसपी गणेश बमले बताए। घटनाको अनुसन्धान भइरहेको उनले बताए।
भाग्य बिग्रेर यस्तो भयो: हरिलाल
निलम्बित शिक्षक हरिलाल जोशीले आफूले प्रशासनिक अभिभावकत्व पुरा गरेको बताएका छन्। तर भाग्गले साथ नदिँदा यस्तो अवस्था आएको उनको भनाइ छ।
‘आफ्नै छोरा सरह मानेर प्रशासनिक अभिभावकत्व बहन गर्न खाजेको थिएँ, भाग्य बिग्रेको बेला के–के हुन्छ थाहा छैन।’ उनले भने, ‘मानसिक तनाव दिने कुनै मानसिकता थिएन, यसो हुन्छ भनेर के थाहा? भाग्य बिग्रेर यस्तो भयो।’
रोल्पामा सार्वजनिक यातायातमा नयाँ भाडादर कायम (भाडादरसहित)
कात्तिक ९, रोल्पा । व्यापक जनगुनासो बाहिर आएपछि जिल्ला प्रशासन कार्यालय रोल्पाले सार्र्वजनिक यातायातको भाडादर कायम गरेको छ। जिल्लाभित्र र बाहिर चल्ने सवारी साधनले मनपरी हिसाबले भाडा उठाउन थालेपछि स्थानीय प्रशासनले नयाँ भाडादर कायम गरेकोे हो। जिल्ला प्रशासन कार्यालय रोल्पाले मंगलवार एक बिज्ञप्ती निकाल्दै नयाँ भाडादरको सूची नै सार्र्वजनिक गरेको थियो। जिल्ला भित्र पक्की सडकमा […]